Google Mepu inovandudzwa neyemushandisi mushandisi uye inoratidza nzvimbo dzekufarira | IPhone nhau
Chaizvoizvo mune yangu yapfuura chinyorwa ini ndakaita mareferenzi kune yazvino gadziriso iyo Apple Mepu yakagashirwa kuwedzera ruzivo nezve zvifambiso zveruzhinji muSan Diego neBritish Columbia, ichisimbisa kuti iyo Cupertino-yakavakirwa kambani haina kukanganwa vashandisi vayo uye kuti kunyangwe zvingave zvisingaite senge, inoramba ichiwedzera mabasa matsva anowanikwa chete kune vashoma boka revashandisi, senge yeruzhinji ruzivo ruzivo.
Mukuedza kuchengeta vashandisi veIOS vachishandisa Apple Mepu, iyo Mountain View-based kambani yakangoburitsa itsva yekuvandudza kune yayo iOS app. kuratidza nyowani mushandisi interface mune izvo zvinhu zvinoratidzwa mune inochinja nzira, kunyanya patinogadzira nzira yekusvika kwatiri kuenda. Uye zvakare, kambani yakawedzerawo ruzivo pamusoro penzvimbo dzakasiyana dzekufarira dzatinogona kuwana munzira yekuenda kwatiri kuenda, kuitira kuti rwendo ruve rwunonakidza zvikuru tichiziva kuti tinogona kushanyira isu tichiita nzira.
Kunyangwe kutanga kweApple Mepu paIOS kwaive kwakaomarara, zvishoma nezvishoma kwave kuwana nzvimbo kuGoogle Mepu uye parizvino yakakwanisa kuwana kuvimba kwevashandisi nekatatu huwandu hwevashandisi veGoogle Mepu pane iOS. Nekudaro, Google haikandi tauro uye inoramba ichishanda nesimba kuti itore chikamu chechikamu chayaive nacho munguva yakapfuura uye nekuda kweizvi yakavandudza mushandisi uye inotiratidza iwo akakosha mapoinzi ekufarira muguta ratiri, chinhu Chinokosheswa zvikuru kana isu tichinyanya kushandisa Google Mepu kuenda kunze kwenyika, kunyanya sezvo tichigona kurodha pasi Google Mepu pane yedu kifaa uye tichikwanisa kuishandisa pasina dhipoziti yedhata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Mepu inovandudzwa neyemushandisi mushandisi uye inoratidza nzvimbo dzekufarira